Ny Realme 6S dia aseho: elanelam-potoana vaovao misy Helio G90T sy fakan-tsary fampiasa | Androidsis
Realme dia nanolotra ho an'i Espana fitaovana vaovao eo anelanelany izay mitovy amin'ny Realme 6 dia zava-misy noho ny famolavolana saika mitovy. Ny tena manaitra dia ny fitazonana vidiny mifanentana hahafahana miady amin'ny tsena izay misy telefaona maro, ny mid-range.
El ny realme 6s Hanana processeur tsy dia fantatra loatra na eo aza ny nanombohana azy tamin'ny volana jolay tamin'ny taon-dasa, tsy mbola nisy maodely marobe natomboka tamin'ity chip MediaTek ity. ny Ny CPU voalaza dia i Helio G90Valo ambaratonga valo ary natao ho an'ny fampisehoana tsara amin'ny lalao video.
1 Realme 6S, ireo fiasa feno
2 Fakan-tsary efatra sy fifandraisana tsara
Realme 6S, ireo fiasa feno
El Realme 6S Mamirapiratra amin'ny alàlan'ny efijery 6,5-inch miaraka amina vahaolana Full HD + (2.400 1.080 x 3 teboka) izy io, mampiasa ny fiarovana Gorilla Glass 90 izay azo ianteherana amin'ny gorodona sy ny vongan-tany, ankoatry ny tahan'ny haavo 20 Hz sy 9: 90,5. Ny tahan'ny efijery dia 480% miaraka amin'ny famirapiratan'ny XNUMX nits.
Realme 6S eo ambanin'ny chassis dia mametraka ny puce Helio G90T 8-core MediaTek mitondra hatramin'ny 2,05 GHz, 4 GB RAM LPDDR4X ary fitehirizana 64 GB miaraka amin'ny haingam-pandeha UFS 2.1 azo alaina amin'ny alàlan'ny slot fanitarana Micro SD. Ny iray amin'ireo tanjany maromaro dia ny batterie, 4.300 mAh ny fahaiza-manao miaraka amina vidiny 30W haingana ary ny rindrambaiko dia Android 10 miaraka amin'ny sosona Realme UI.
Fakan-tsary efatra sy fifandraisana tsara
La fampifanarahana fakan-tsary quad Mitsangana izy, 48 MP ny sensor voalohany, tohanan'ny sensor 8-zoro 2 MP, makro 2 MP ary sensor MP-16 MP. Ny fakan-tsary selfie dia 79,3 MP miaraka amin'ny fahitana XNUMXº. ny ny realme 6s Telefaona 4G izy io, mampiditra fifandraisana Wi-Fi, Bluetooth, NFC, seranana famahanana Micro USB-C ary fakan-tsarimihetsika. Ilay mpamaky ny rantsantanana dia mampihatra azy amin'ny sisiny.
ny realme 6s
SCREEN AMOLED 6.5 santimetatra miaraka amin'ny famaha Full HD + - tahan'ny famelomana 90 Hz - Gorilla Glass 3
TOERANA FITONDRANA AN-TANY 64 GB UFS 2.1 - Manana slot SD Micro izy io
CAMERAS REAR 48 MP f / 1.8 sensor lehibe - 8 MP sensor amin'ny zoro malalaka - Sensor makro 2 MP - sensor sensor 2 MP
CAMERA HATRANY 16 MP f / 2.0
BATERA 4.300 mAh misy fiampangana haingana 30W
RAFITRA FIKIRAKIRANA Android 10 miaraka amin'ny Realme UI
CONNECTIVITY 4G - WiFi - Bluetooth - USB-C - 3.5mm Jack - Dual SIM - NFC
ASA hafa Mpamaky ny tanan-tanan-tanana - mahatohitra Splash
DIMENSION SY lanjan'ny: 162.1 x 74.8 x 8.9 mm - 191 grama
El Realme 6S dia ho tonga amin'ny andiany tokana an'ny 4 GB RAM ary fitehirizana 64 GB ho an'i Carrefour sy ny fivarotana an-tserasera Realme ihany. Ny vidin'ity smartphone vaovao ity dia 199 euro ary tonga mainty.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Realme 6S dia aseho: ny elanelam-potoana vaovao misy Helio G90T sy fakan-tsary fakan-tsary
Ahoana ny fomba hitsapana ny lohahevitra maizina Google Chrome amin'ny fikarohana amin'ny Android